Raha sanatria, ka misy ny fihoaram-pefy ao, dia misy ny fepetra raisin’ny mpitandro ny filaminana amin’ny fanakatonana izany avy hatrany. Fokontany 45 no ao amin’ity Boriborintany fahatelo ity ary misandrahaka amin’izany ireo mpitandro ny filaminana amin’ny fanaraha-maso ireny toeram-pisotroana ireny ary manohy ny fisafoana koa. Hiezaka ary atao izay hahavitan’ny asa, hoy ny mpitandro ny filaminana. Araka ny fanazavana voaray, hafa ny Bar, hafa mihitsy ny “ Bar – karaoke” ary ny “Bar - Discotheque”. Ny Bar dia manaja ny ora fidiany ara-dalàna fa ny “Bar – Discothéque sy ny karaoke” dia any amin’ny 11 ora sy sasany vao mihidy. Ho an’ity farany, raha te hanatombo ny ora fisokafany, dia mila mangataka fahazoan-dalana any amin’ny prefe, dia mihemotra ny ora fikatonany, hoy ny fanazavana azo. Misy hatrany ny fepetra raisina, raha toa ka misy ny fioharam-pefy amin’ireo toera-pisotroana ireo.
“Garde à vue”
Mizara roa ny fitazonana olona ao amin’ny “violon”, hoy hatrany ny fanazavana. Raha resaka “judiciaire” dia olona atao famotorana no tazonina na olona ahiana no ilana azy, dia tsy maintsy tazonina atao fanadihadiana iny, hoy ny hatrany ny fanazavana. Faharoa, ny “mesure administrative”, izany hoe tsy mandika lalàna fa ny lalàn’ny fiarahamonina no dikaina toy ny fanaovana maloto eny an-kalamanjana, miloka, mivalan-drano amoron-dalana, miady eny an-dalambe, dia azo samborina sy tazonina “violon”. Eo koa ny tsy fitondrana kara-panondro, ka hidina 48 ora ilay olona, dia atao ny fitanana an-tsoratra azy avy eo. Mikasika ny fakana an-keriny indray, dia efa misy ny sampana misahana izany. Ho an’ny polisy dia ny “Brigade Criminelle” no misahana azy. Eo koa ny zandary izay mandray ny andraikiny mifanaraka amin’izany, hoy ny mpitandro ny filaminana. Na tsy ao anatin’ny fifidianana koa aza dia misy ny fakana an-keriny, hoy hatrany ny fanazavana voaray.